सरकारविरुद्ध प्रवासी नेपालीको आक्रोश- अब हुन्डीबाट पैसा पठाउँछौं ! - Sacho Post
सरकारविरुद्ध प्रवासी नेपालीको आक्रोश- अब हुन्डीबाट पैसा पठाउँछौं !
२०७७ भाद्र ४, बिहीबार ०५:२८ बजे
ग्रुपहरुमा हाम्रै साथीहरु पनि लेखिरहनुभएको छ, समाजिक सञ्जालमा जताततै सरकारले हेरेन, अब घाटा खाएर सरकारलाई किन रेमटि्यान्स पठाउने? भन्नेखालका पोस्ट देखिएका छन्,’उनले भने,’यो अवैध हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकारलाई सबक सिकाउन रेमिट्यान्सको वैधानिक आप्रवाह रोक्नुपर्छ भनेर भड्काउन खोजिएको छ ।’
वैदेशिक हुण्डीका कारण बाह्य मुलुकबाट देशमा आउनुपर्ने जति परिमाणमा विदेशी मुऽा आउँदैन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अभिलेखको रुपमा पनि देखिँदैन । विप्रेषण खाता घाटामा रहन्छ ।
दुबई एयरपोर्टमा अलपत्र नेपालीले संरक्षण पाए तर पर्सीसम्म उद्धार नभए दैनिक जरिवाना थपिने